၂၀၁၉ ခုနှစ်မေလ ၂၈ ရက်တွင် USDA Hemp Memo ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်
USDA HEMP မှတ်စုတို - စာသားအပြည့်
Potcast ကိုနားထောင်ပါ၊ ဒါမှမဟုတ်အပေါ်ကကြည့်ပါ။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော USDA Hemp Memo
UnitedStates Agricu ဦး စီးဌာနlture
ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၊ ၂၀၁၈ တွင်သမ္မတသည်စိုက်ပျိုးရေးတိုးတက်မှုအက်ဥပဒေ၊ အယ်လ် 20-2018 (2018 လယ်ယာဘီလ်) ။ 115 လယ်ယာဥပဒေကြမ်းတွင်ဖော်ပြထားသောသတ်မှတ်ချက်များအတွင်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလျှော်ထုတ်လုပ်မှုကိုတရားဝင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အထွေထွေအကြံပေးရုံး (OGC) သည် sev နှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းများကိုဖြေရှင်းရန်ပူးတွဲပါဥပဒေရေးရာအမြင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်လယ်ယာဥပဒေကြမ်း၏လျှော်နှင့်ဆက်စပ်သောပြဌာန်းချက်များ - ၂၀၁၄ ခုနှစ်စိုက်ပျိုးရေးအက်ဥပဒေ (၂၀၁၄ ခုနှစ်လယ်ယာဥပဒေကြမ်း) တွင်စက်မှုလုပ်ငန်းတင်ပါးရှေ့ပြေးအခွင့်အာဏာကိုဖယ်ရှားခြင်းအပါအဝင် (ပုဒ်မ ၇၆၀၅)၊ ၁၉၄၆ ခုနှစ်စိုက်ပျိုးရေးစျေးကွက်အက်ဥပဒေကိုပြည်နယ်နှင့်အိန္ဒိယလူမျိုးများမှလျှော်ထုတ်လုပ်မှုကိုထိန်းညှိရန်သို့မဟုတ်စိုက်ပျိုးရေး ဦး စီးဌာန (USDA) မှလျှော်ထုတ်လုပ်မှုကိုစီမံရန်ခွင့်ပြုရန်ပြင်ဆင်ခြင်း (ပုဒ်မ ၇၆၀၅)၊ ပြည်နယ်များကုန်သွယ်ရေးအတွက်လျှော်အခမဲ့စီးဆင်းမှုကိုသေချာတဲ့ပြensuring္ဌာန်းချက် (ပုဒ်မ ၇၆၀၅)၊ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းဥစ္စာအက်ဥပဒေကနေလျှော်ဖယ်ရှားရေး (ပုဒ်မ 12619) ။
၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၈ တွင်လယ်ယာမြေဥပဒေပြ2018္ဌာန်းခဲ့သည့်အတိုင်းလျှော်ကိုထိန်းချုပ်ထားသည့်ပစ္စည်းဥစ္စာအက်ဥပဒေဇယား ၁ မှဖယ်ထုတ်ပြီးထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းမဟုတ်တော့ပါ။
USDA သည် ၁၉၄၆ ခုနှစ်စိုက်ပျိုးရေးစျေးကွက်အက်ဥပဒေတွင်ပါရှိသော ၂၀၁၈ Fa2018m ဥပဒေကြမ်း၏သစ်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာပြဌာန်းချက်အသစ်များအားအကောင်အထည်ဖော်သည့်စည်းမျဉ်းများကိုထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ပြည်နယ်နှင့်လူမျိုးစုအရပြည်နယ်သို့မဟုတ်လူမျိုးစုအစီအစဉ်အရဖြစ်စေ၊ လိုင်စင်အရထုတ်လုပ်ထားသောတင်ပို့မှုကိုတားမြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကြံ့ဖွံ့အောက်မှာထုတ်ပေး
ပြည်နယ်နှင့်အိန္ဒိယလူမျိုးစုများသည် ၂၀၁၄ လယ်ယာအရတရား ၀ င်ထုတ်လုပ်သောပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်တင်ပို့မှုကိုအစိုးရမှတားမြစ်မည်မဟုတ်ပါ
ထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဖက်ဒရယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းခံယူချက်ရှိသူသည်စိုက်ပျိုးရေးစျေးကွက်အက်ဥပဒေအရလျှော်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ၁၀ နှစ်ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲသီးသန့်ဖယ်ထုတ်ထားသည်။ ခြွင်းချက်၏ခြွင်းချက်တစ်ခုမှာ ၂၀၁၄ လယ်ယာဥပဒေကြမ်းအရလျှော်ဖွတ်စွာကြီးထွားနေသူနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၈ မတိုင်မီ နှင့်အဘယ်သူ၏ခံယူချက်ကိုလည်းထိုနေ့စွဲမတိုင်မီဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
MEMORANDUM မေလ 28, 2019
၂၀၁၈ ခုနှစ်လယ်ယာဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုပြီးနောက်လျှော်ကိုသာ (၁) ခိုင်လုံသော USDA ထုတ်ပေးသောလိုင်စင်ဖြင့် (၂) ကြံ့ဖွံ့အတည်ပြုထားသောပြည်နယ်သို့မဟုတ်လူမျိုးစုအစီအစဉ်အရ (၂) ၂၀၁၄ လယ်ယာဥပဒေကြမ်း၏စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလျှော်ကြေးလေယာဉ်မှူးအာဏာအောက်တွင် (၂) သာစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ ။ USDA သည် 2018 လယ်ယာဥပဒေကြမ်း၏ပြunder္ဌာန်းချက်အရ USDA လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန်အစီအစဉ်ကိုချမှတ်ပြီးနောက်တစ်နှစ်အကြာတွင်ထိုစမ်းသပ်မှုအာဏာသက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။
အများပြည်သူသိရန်အရေးကြီးသည်မှာ ၂၀၁၈ လယ်ယာဥပဒေကြမ်းသည်ပြည်နယ်နှင့်အိန္ဒိယလူမျိုးစုများ၏အခွင့်အာဏာကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးဥပဒေများကိုပြregul္ဌာန်းရန် ထုတ်လုပ်မှု ဖက်ဒရယ်ဥပဒေထက်ပိုမိုတင်းကြပ်ဖြစ်ကြောင်းလျှော်၏။ ထို့ကြောင့်ပြည်နယ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အိန္ဒိယလူမျိုးစုတစ်ခုသည်လျှို့ဝှက်တင်ပို့မှုကိုထိုပြည်နယ်သို့မဟုတ်လူမျိုးစုများမှတစ်ဆင့်တင်ပို့ခြင်းကိုတားဆီး။ မရပါကပြည်နယ်သို့မဟုတ်လူမျိုးစုဆိုင်ရာဥပဒေများသည်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်မျိုးနွယ်စုအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်စာချုပ်၌ကြီးထွားလာခြင်းကိုတားမြစ်ထားသည်။
၂၀၁၈ လယ်ယာဥပဒေကြမ်းသည်ကျန်းမာရေးနှင့်လူသား ၀ န်ဆောင်မှုများအတွင်းရေးမှူးသို့မဟုတ်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်ဆေးဝါးများဆိုင်ရာကော်မရှင်နာ၏သက်ဆိုင်ရာအမေရိကန်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ (FDA) ဥပဒေများအောက်ရှိလျှော်ကိုထိန်းညှိရန်အခွင့်အာဏာကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းများမပြုလုပ်ရန်အလေးပေးရန်အရေးကြီးသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်သစ်ထုတ်လုပ်မှုအာဏာပိုင်များကိုအကောင်အထည်ဖော်မည့်စည်းမျဉ်းများကို USDA မှထုတ်ပြန်လိမ့်မည်။
စတီဗင် ER VADEN
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၏ SONNY PERDUE အတွင်းရေးမှူးချုပ်အဘို့အ MEMORANDUM
HEMP နှင့်စပ်လျဉ်း။ 2018 ခုနှစ်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးတိုးတက်မှုအက်ဥပဒေပြဌာန်းချက်များအပေါ်ဥပဒေရေးရာအမြင်
ဤစာချွန်လွှာသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးတိုးတက်မှုအက်ဥပဒေ၏ပြဌာန်းချက်နှင့် ပါတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ဥပဒေရေးရာထင်မြင်ချက်ကိုပေးသည်။ ("1 လယ်ယာဥပဒေကြမ်း"), Pu_b ။ လျှော်နှင့်စပ်လျဉ်း L ကိုအမှတ် 2018-2018 ။
အောက်တွင်ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်း၊ ဤစာချွန်လွှာသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၊ ၂၀၁၈ တွင် 2018 Fam1 ဥပဒေပြthe္ဌာန်းသည့်အနေဖြင့်လျှော်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းဥစ္စာအက်ဥပဒေ (“ CSA”) ၏အစီအစဉ် ၁ မှဖယ်ထုတ်ပြီးမည်သည့်ဆေးခြောက်မဆိုထည့်သွင်းရန်အတွက်ထိန်းချုပ်ထားသည့် Hemp သည် 20 Fa2018m Bill အောက်တွင်သတ်မှတ်သည်။ အပူချိန် ၉.၃ ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုသောမြစ်ဝကျွန်းပေါ် ၉ tetrahydrocannabinol (“ THC”) ပါ ၀ င်သည့်အပင်သို့မဟုတ်ယင်းမှဆင်းသက်လာမှု။
စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များ (“ USDA” သို့မဟုတ်“ Depa1tment”) သည် ၁၉၄၆ ခုနှစ်စိုက်ပျိုးရေးစျေးကွက်အက်ဥပဒေ (“ AMA;”) ၏ခေါင်းစဉ် G တွင်ပါရှိသော ၂၀၁၈ လယ်ယာဥပဒေကြမ်း၏လျှော်ထုတ်လုပ်မှုပြimplementing္ဌာန်းချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်သည့်စည်းမျဉ်းများကိုထုတ်ပြန်ပြီးနောက်၊ ပြည်နယ်သို့မဟုတ်လူမျိုးစုအစီအစဉ်အရသို့မဟုတ်ဌာနဆိုင်ရာအရထုတ်ပေးသောလိုင်စင်အရတရား ၀ င်ထုတ်လုပ်ထားသောတင်ပို့မှုကိုပြည်နယ်အတွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်တင်ပို့ခြင်းကိုတားမြစ်သည်။
ပြည်နယ်နှင့်အိန္ဒိယလူမျိုးစုများသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်စိုက်ပျိုးရေးအက်ဥပဒေ (“ ၂၀၁၄ လယ်ယာဥပဒေကြမ်း”) အရတရား ၀ င်ထုတ်လုပ်သောပို့ကုန်များသို့မဟုတ်တင်ပို့မှုကိုပြည်နယ်အတွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်တင်ပို့ခြင်းကိုတားမြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
A ထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဖက်ဒရယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းခံရသူသည် AMA ၏စာတန်းထိုး G အရလျှော်ထုတ်လုပ်ခြင်းအပေါ် ၁၀ နှစ်တာ ၀ န်ယူခွင့်မရှိသောကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။ ခြွင်းချက်တစ်ခုသည် ၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၈ မတိုင်မီ ၂၀၁၄ Frum ဘီလ်အောက်တွင်တရား ၀ င်ကြီးထွားလာပြီးထိုယုံကြည်ချက်ကိုထိုနေ့မတိုင်မီတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဤစာချွန်လွှာသည်လျှော်ရည်နှင့်စပ်လျဉ်း။ 2018 လယ်ယာဥပဒေမူကြမ်း၏အရေးကြီးသောကဏ္ aspects နှစ်ခုကိုလည်းအလေးပေးဖော်ပြသည်။ ပထမ ဦး စွာ၊ 2018 လယ်ယာဥပဒေမူကြမ်းသည်ပြည်နယ်နှင့်အိန္ဒိယလူမျိုးစုများ၏ဥပဒေကိုပြand္ဌာန်းရန်နှင့်ပြenfor္ဌာန်းရန်အခွင့်အာဏာကိုထိန်းသိမ်းထားသည် ထုတ်လုပ်မှု ဖက်ဒရယ်ဥပဒေထက်ပိုမိုတင်းကြပ်သောလျှော်၏ (သို့သော်ပြည်နယ်များသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်တင်ပို့မဟုတ်) ။ ဥပမာအားဖြင့်, ပြည်နယ်၏လျှော်၏စိုက်ပျိုးမှုသို့မဟုတ်စိုက်ပျိုးမှုကိုတားမြစ်သည့်ပြည်နယ်ဥပဒေအားဆက်လက်ပြဌာန်းလိမ့်မည်။ ဒုတိယအချက်မှာ၊ ၂၀၁၈ လယ်ယာဥပဒေကြမ်းသည်သက်ဆိုင်ရာအမေရိကန်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေများအရကျန်းမာရေးနှင့်လူသား ၀ န်ဆောင်မှုများအတွင်းရေးမှူးသို့မဟုတ်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးများဆိုင်ရာကော်မရှင်နာ၏အခွင့်အာဏာကိုအကျိုးသက်ရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြုပြင်ခြင်းမရှိပါ။
Th62018 လယ်ယာဘီလ်, အရက်ဆိုင်။ ဒီဇင်ဘာလ 115, 334 ရက်တွင်ပြဌာန်းအယ်လ်အမှတ် 20-2018, hemp နှင့်ပတ်သက်။ ပြဌာန်းချက်အများအပြားပါဝင်သည်.1ဤဥပဒေရေးရာထင်မြင်ချက်ကိုအောက်တွင်အကျဉ်းချုံးပုဒ်မ 7605, 10113, 10114 နှင့် 12619 အပေါ်အာရုံစိုက်။
ပုဒ်မ 7605 ၂၀၁၄ လယ်ယာဥပဒေကြမ်း (USC § 7606) ၏ပုဒ်မ ၇၆၀၆ ကိုအဆင့်မြင့်ပညာရေးအဆင့်မြင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့သို့မဟုတ်ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးဌာနမှစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလျှော်သီးကိုအချို့သောအခြေအနေများတွင်စိုက်ပျိုးရန်သို့မဟုတ်စိုက်ပျိုးရန်ခွင့်ပြုထားသည့်ပုဒ်မ ၇၆၆ ကိုပြင်ဆင်သည်။ လျှော်ထုတ်လုပ်မှုခွင့်ပြုသောပြည်နယ်။ အခြားအချက်များအပြင်ပုဒ်မ ၇၆၀၅ သည်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအတွင်းရေးမှူး (“ အတွင်းရေးမှူး”) သည် ၂၀၁၄ လယ်ယာဥပဒေကြမ်း§ ၇၆၀၆ အားဤလျှော်သုတေသန prograJ2014 များလေ့လာမှုနှင့်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်သို့တင်ပြရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ပုဒ်မ ၇၆၀၅ တွင်ပုဒ်မ ၂၉၇ စီအောက်တွင်အတွင်းရေးမှူးမှအစီအစဉ်ကိုအတွင်းရေးမှူးကပြဌာန်းသော နေ့မှစ၍ တစ်နှစ်အကြာ ၂၀၁၄ ခုနှစ် Frum Bill§7ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ 2
ပုဒ်မ 10113 လျှော်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောစာတန်းထိုး G (အပိုင်း ၂၉၇ အေမှ ၂၉၇E မှ (၇) အထိ USC §§ 11 -297s) ကိုထည့်ခြင်းဖြင့် AMA ကို aJ297ends ဤအခွင့်အာဏာအသစ်အရ၊ ပြည်နယ်သို့မဟုတ်အိန္ဒိယနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိလျှော်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရအခွင့်အာဏာရှိလိုသောပြည်နယ်သို့မဟုတ်အိန္ဒိယလူမျိုးစုသည်အတွင်းရေးမှူး၏ခွင့်ပြုချက်အရထိုစောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အစီအစဉ်ကိုတင်ပြနိုင်သည်။ လျှော်ထုတ်လုပ်မှု .. မြင် AMA 297B §။ အတည်ပြုထားသောအစီအစဉ်များမရှိသောပြည်နယ်များသို့မဟုတ်အိန္ဒိယလူမျိုးစုများအတွက်အတွင်းရေးမှူးသည်ထိုဒေသများရှိလျှော်ထုတ်လုပ်မှု၏စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဌာနဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကိုတည်ထောင်ရန်ညွှန်ကြားသည်။ မြင် AMA§ 297C ။ The
1 ၂၀၁၄ Fann ဘီလ်ကသတ်မှတ်ပါတယ် "စက်မှုလျှော်" "Cannabis တံတွေးအယ်လ်နှင့်ဤအပင်၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းမျှမကြီးထွားသေးသည်ဖြစ်စေ Delta-9 tetrahydrocannabinol ပါဝင်မှုသည် ၀.၃ ရာခိုင်နှုန်းထက်ပို။ အလေးချိန်ရှိသည်။ ” 0.3 USC §7(က) (5940) §။ အဆိုပါ2Fann ဘီလ်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသော defmition အသစ်ကဆက်ပြောသည် "လျှော်" ၏ AMA ၏ပုဒ်မ ၂၉၇ အေတွင်“ Cannabis saliva L. အပင်နှင့်၎င်းအပင်များ၏အစေ့များနှင့်ဆင်းသက်လာမှုများ၊ ထုတ်ယူမှုများ၊ ဆေးခြောက်များ၊ isomers၊ အက်ဆစ်များ၊ ဆားများ၊ Delta-297 tetrahydrocrumabinol ပမာဏသည် ၀.၃ ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုသော dJy အလေးချိန်ရှိသည်။ ” ၇ USC
16390 (1) ။ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှစ်ခုလုံးသည်ဆေးခြောက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လျှော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် Cannabis sativa L. စက်ရုံအတွက် THC ၏ ၀.၃ ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုသောအာရုံစူးစိုက်မှုလိုအပ်သည်။ ဒီဥပဒေရေးရာထင်မြင်ချက်၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့ငါစည်းကမ်းချက်များကိုသုံးပါ "လျှော်" နှင့် "စက်မှုလျှော်" အပြန်အလှန်လဲလှယ်။
၂ ၂၀၁၈ ခုနှစ် Fann ဘီလ်တွင်ပါ ၀ င်သည့်ညီလာခံအစီရင်ခံစာသည်ဖျက်သိမ်းခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအောက်ပါအတိုင်းရှင်းပြသည် -“ ပုဒ်မပါအတိုင်းအတိုင်းအတာအပြည့်အဝစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုကိုခွင့်ပြုသည့်နောက်ဆုံးစည်းမျဉ်းကိုအတွင်းရေးမှူးကထုတ်ပြန်ပြီးနောက်တစ်နှစ်အကြာတွင်တင်ပါးသုတေသနစမ်းသပ်မှုအစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ အဆိုပါ [AMA] ၏ 2C ။ " HR rep ။ 2018 (297) မှာအမှတ် 115-1072 ။ ·
မြင် Ama 297D §။ အာဏာပိုင်အသစ်သည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုလည်းပေးသည် (ကြည့်ရှု AMA § 297A) နှင့်သင့်လျော်သောတစ် ဦး ခွင့်ပြုချက် (ကြည့်ရှု AMA § 297E) ။
ပုဒ်မ 10114 (7 UC § 16390 မှတ်စု) သည် 2018 လယ်ယာဥပဒေကြမ်း၏ခေါင်းစဉ် X တွင်မည်သည့်အရာမျှလျှော်ကြေးနန်းသို့မဟုတ်လျှော်ထုတ်ကုန်များကြားတွင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းကိုတားမြစ်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ ပုဒ်မ ၁၀၁၁၄ အရပြည်နယ်နှင့်အိန္ဒိယအနွယ်များသည်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်အိန္ဒိယလူမျိုးစုမှတစ်ဆင့်စာတန်းထိုး၊ G နှင့်အညီထုတ်လုပ်ထားသောလျှော်သို့မဟုတ်လျှော်ထုတ်ကုန်များကိုနိုင်ငံတွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုတားမြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ပုဒ်မ 12619 ဆေးခြောက်ပုဒ်မ ၁ ၆၁၉ ကို CSA အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှလျှော်ထုတ်ခြင်းကိုဖယ်ထုတ်ရန် CSA ကိုပြင်ဆင်သည်။
2018 လယ်ယာဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုရာတွင်ကွန်ဂရက်သည်တင်ပို့မှုကိုရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းသတ်မှတ်ထားသည်။ သို့သော်ပြည်နယ်နှင့်အိန္ဒိယလူမျိုးစုများအနေဖြင့်လျှော်ထုတ်လုပ်မှုကိုပိုမိုတင်းကြပ်သည့်ဥပဒေများပြen္ဌာန်းရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာလ 2018 ရက်နေ့တွင် 1 Fa20m ဥပဒေကြမ်း၏အတည်ပြုချက်၏အဖြစ်120181 Hemp ဇယားကနေ Remove'd ခဲ့ပြီ I ထိန်းချုပ်ထားသော ၀ တ္ထုများအက်ဥပဒေနှင့်၎င်းသည်ထိန်းချုပ်ထားသည့်ပစ္စည်းမဟုတ်တော့ပါ။
CSA § ၁၀၂ (၆) က "ထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်း" ဟုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ ဤခေါင်းစဉ်၏အပိုင်း B ၏ဇယား ၁၊ ၂၊ ၂၊၊ JV သို့မဟုတ် V တွင်ပါ ၀ င်သောမူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ချက်ချင်းရှေ့ပြေးဖြစ်သည်။ ။ ။ ။ " 102 USC §6(21) ။ Marijuana802 သည် CSA ၏ဇယား ၁ တွင်ဖော်ပြထားသောထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ မြင် CSA § 202 (ဂ) (10), အချိန်ဇယားကိုငါ (21 USC § 812 (ဂ), ဇယားငါ (ဂ) (l0)); 21 CFR § 1308.ll ()) (23) ။
2018 လယ်ယာဥပဒေကြမ်းသည် CSA ကိုနည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ပထမ၊ ၂၀၁၈ လယ်ယာဥပဒေပုဒ်မ ၁၂၆၁၉ (က) h mp ကိုဖယ်ထုတ်ရန်အတွက် CSA အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်ကိုဆေးခြောက်ကိုပြုပြင်ခဲ့သည်။ 2018 Fam12619 ဥပဒေကြမ်းမထုတ်ပြန်မီCSA§ 2018 (1) (102 USC 16 (21)) သည်ဆေးခြောက်ကိုအောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ခဲ့သည်။
'marihuana' ဟူသောဝေါဟာရသည်ကြီးထွားမှုရှိမရှိ Cannabis sativa L. အပင်၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုဆိုလိုသည်။ အစေ့များ၊ ထိုကဲ့သို့သောစက်ရုံမဆို pa1t ထံမှထုတ်ယူဗဓေလသစ်; ၎င်းဒြပ်ပေါင်းများ၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းများ၊ ဆားများ၊ အနကျအဓိပ်ပါယျ၊ အရောအနှောများသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအပင်၏မျိုးစေ့များသို့မဟုတ်အရာများဤကဲ့သို့သောအပင်၏ရင့်ကျက်သောရိုးတံများ၊ ထိုကဲ့သို့သောအပင်မှထုတ်လုပ်သောအမျှင်များ၊ အခြားဒြပ်ပေါင်းများ၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဆား၊ အနကျအဓိပ်ပါယျ၊ အရောအနှောများ (၎င်းမှထုတ်ယူသောဗဓေလသစ်များ မှလွဲ၍) ၏ရင့်ကျက်သောရိုးတံများ၊ ဖိုင်ဘာ၊ ဆီသို့မဟုတ်ကိတ်မုန့်၊
၃ ထပ်ဆင့်နောက်ခံအတွက် - ၂၀၁၈ Fann Bi.II ​​မတိုင်မီလျှော်ထုတ်လုပ်မှုတွင်၊ မြင် ကွန်ဂရက်သုတေသန ၀ န်ဆောင်မှု၊ “ စိုက်ပျိုးရေးကုန်ကြမ်းအဖြစ်ဖွဲ့ခြင်း” (RL32725) (ဇူလိုင် ၉၊ ၂၀၁၈ တွင်ပြင်ဆင်)၊ Availတတ်နိုင် at https: // က crရက်စက်မှု.congress.gov/product/pdf/RL/RL32725.
၄ ဤထင်မြင်ချက်သည်“ marihuana” စာလုံးပေါင်းကိုအသုံးပြုသော CSA ကိုကိုးကားခြင်း မှလွဲ၍“ ဆေးခြောက်” ၏ဘုံစာလုံးပေါင်းကိုအသုံးပြုသည်။
2018 လယ်ယာဥပဒေကြမ်းတွင်ပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း CSA ဆေးခြောက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်ယခုဖတ်ရှုသည် -
ပုဒ်မခွဲ (ခ) မှဘာသာရပ်၊ 'marihuana' ဟူသောဝေါဟာရသည် Cannabis အပင်၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုဆိုလိုသည် sativa , ကြီးပွားသည်ဖြစ်စေမ၊ အစေ့များ၊ ထိုကဲ့သို့သောစက်ရုံ၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းမှထုတ်ယူဗဓေလသစ်; နှင့်ထိုကဲ့သို့သောစက်ရုံ၏ဒြပ်ပေါင်းများ, ထုတ်လုပ်, ဆား, အနကျအဓိပ်ပါယျ, အရောအနှောသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်မှု, \_ t ၎င်း၏အစေ့များသို့မဟုတ်ဗဓေလသစ်။
marihuana ဟူသောအသုံးအနှုန်းတွင်မပါ ၀ င်ပါ
297 ၏စိုက်ပျိုးရေးစျေးကွက်အက်ဥပဒေပုဒ်မ 1946A အတွက်သတ်မှတ်အဖြစ်လျှော်, ဒါမှမဟုတ်
ထိုကဲ့သို့သောအပင်၏ရင့်ကျက်ရိုးတံ, ထိုကဲ့သို့သောရိုးတံကနေထုတ်လုပ်ဖိုင်ဘာ; ဆီသို့မဟုတ်ကိတ်မုန့်
ထိုကဲ့သို့သောအပင်၏အစေ့, အခြားမည်သည့်ဒြပ်ပေါင်းများ, ထုတ်လုပ်, ဆား, အနကျအဓိပ်ပါယျ, အရောအနှော, ဒါမှမဟုတ်ပြင်ဆင်မှု ထိုကဲ့သို့သောရင့်ကျက်သောရိုးတံ (ထိုမှဗဓေလသစ် exn ·မှပြုမူ), ဖိုင်ဘာ, ဆီ, သို့မဟုတ်ကိတ်မုန့်, ​​သို့မဟုတ်အပင်ပေါက်ရန်မတတ်နိုင်သောထိုကဲ့သို့သောအပင်၏အမျိုးအနွယ်၏။
ဒုတိယအချက် - ၂၀၁၈ လယ်ယာဥပဒေမူကြမ်းအမှတ် ၁၂၆၁၉ (ခ) သည်“ tetrahydrocannabinols” ဟူသောဝေါဟာရမှဆုံတွင်း၌ THC ကိုချန်လှပ်ရန် CSA ကို ၂၀၁၈ လယ်ယာဥပဒေကြမ်း၊ CSA မှပြင်ဆင်သည့်အတိုင်းပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
202 (ဂ) (ဌ ၇)၊ အချိန်ဇယား ၁ (၂၁ ယူအက်စ်§ ၈၁၂ (ဂ) (ဌ ၇)၊ အချိန်ဇယား ၁) ယခုဖတ်သည် -
tetrahydrocannabinols မှလွဲ။ Tetrahydrocannabinols in လျှော် (အပိုင်းအောက်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း)
297 ၏စိုက်ပျိုးရေးစျေးကွက်အက်ဥပဒေ၏ 1946A) ။
AMA § 297A တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းလျှော်ဖယ်ထုတ်ပစ်ရန်ဆေးခြောက်၏အဓိပ္ပါယ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်၊ ကွန်ဂရက်သည်တင်ပို့မှုကိုအချိန်ဇယား ၁ မှဖယ်ရှားခဲ့ပြီး CSA မှလုံးဝဖယ်ရှားခဲ့သည်။ တနည်းအားဖြင့်လျှော်သည်ထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းမဟုတ်တော့ပါ။ ဒါ့အပြင်လျှော်မှာ THC ဖယ်ထုတ်ပစ်ရန်အချိန်ဇယားကိုငါပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်, ကွန်ဂရက်အလားတူ CSA မှလျှော်အတွက် THC ဖယ်ရှားခဲ့သည်။
အရေးကြီးသောအချက်မှာမှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်မှာဤလျှော်ကိုဤသန္ဓေသားဖျက်သိမ်းခြင်း (နှင့် THC hemp ၌) ဖြစ်သည်။ CSA ကိုအကောင်အထည်ဖော်သောစည်းမျဉ်းများကို ၂၀၁၈ လယ်ယာဥပဒေမူကြမ်း၏ CSA အားပြင်ဆင်ခြင်းကိုထင်ဟပ်စေရန်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သော်လည်းထိုပြောင်းလဲထားသောစည်းမျဉ်းများထုတ်ဝေခြင်းနှင့်အခြားအရေးယူမှုများပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ငါဒီမှာလျှော်၏ decontrolling မိမိကိုယ်ကိုကွပ်မျက်သောအမြင်နှစ်ခုကျောင်းအုပ်ကြီးကန့်ကွက်ဖြေရှင်း။ ပထမ ဦး ဆုံးကန့်ကွက်သည်မှာ CSA အရစည်းမျဉ်းများကိုထုတ်ဝေခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်
201, လျှော်နှင့်ပတ်သက်။ ငါအချိန်စာရင်းမှဥပဒေပြုအပြောင်းအလဲများထိရောက်သောမရှိကြပေ။ ဤကန့်ကွက်မှုသည်မမှန်ပါ။
CSA အချိန်ဇယားကိုပြင်ဆင်ရန်ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်သည်အမှားလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ CSA လက်အောက်တွင်
201 (က) ရှေ့နေချုပ်သည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရအချို့သောတွေ့ရှိချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်မည်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်အခြားအရာဝတ္ထုကိုမဆိုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အခြားအရာများအားထပ်တိုးခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၂၁ USC
81l (က) ။ သို့သျောလညျး, အချိန်ဇယားကိုလည်းပညတ်တော်အားပြောင်းလဲမှုများမှတဆင့်ကွန်ဂရက်ကတိုက်ရိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်; နှင့်ကွန်ဂရက်သည်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။
'ကြည့်ပါ၊ အရက်ဆိုင်။ အယ်လ်ငါ 12-144, § 1152 (ဆေးခြောက်အေးဂျင့်များထည့်သွင်းရန်အချိန်ဇယားကိုငါပြင်ဆင်ခြင်း); အရက်ဆိုင်။ အယ်လ် 101-647,
1902 (က) (anabolic steroids ထည့်သွင်းဖို့အချိန်ဇယားကိုပြင်ဆင်ခြင်း) ။
ဒုတိယကန့်ကွက်ချက်မှာ ၂၁ CFR § ၁၃၀၈.၁၁ တွင်ဖော်ပြထားသောပထမအကြိမ်ပုဒ်မနှင့် ပတ်သက်၍ အချိန်ဇယားကိုပြင်ဆင်ရန်ဥပဒေပြုရေးအပြောင်းအလဲများသည်မပြောင်းလဲသောကြောင့်ဖယ်ရှားခြင်းသည်ထိရောက်မှုမရှိသေးပါ။ ဤသည်ကန့်ကွက်လည်းတရားဝင်မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါဟာ Trump စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို axiomatic ဖြစ်ပါတယ်။ Nat '/ Family Planning & Reprod ကိုကြည့်ပါ။ ကနျြးမာရေး Ass'n, Inc v ။ Gonzales, 468 F.3d 826,829 (DC Cir ။ 2006) (“ [A] တရားဝင်ပြဌာန်းချက်သည်ပaိပက္ခဖြစ်သည့်စည်းမျဉ်းကိုကျော်လွန်သည်။ ” ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်က CSA အချိန်ဇယားငါးခုကိုပြဌာန်းချက်အရတည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ [[s] uch အချိန်ဇယားသည်အစပိုင်းတွင်ဤအပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသောအရာများပါဝင်ရမည်။ ] ၂၁
USC § 812 (က) .6 ကွန်ဂရက်မှထပ်မံပြprovided္ဌာန်းသည်မှာသူသည်ဤအပိုင်းဖြင့်တည်ထောင်ထားသောအစီအစဉ်များကို ၁၉၇၀၊ အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နောက်ပိုင်းတစ်နှစ်မှနှစ်နှစ်အတွင်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်းများကိုထပ်မံပြသခဲ့သည်။ နှင့်နှစ်စဉ်အခြေခံပေါ်မှာပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ " 27 USC § 1970 (က) ။ အချိန်ဇယားကိုအသစ်ပြောင်းရန်နှင့်ပြန်လည်ထုတ်ဝေရန်လိုအပ်ချက်သည်“ [ပြဌာန်းချက်အရတည်ထောင်ခဲ့သည်]” အစီအစဉ်၏ထိရောက်မှုကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ အိုင်ဒီ အခြားအခုနှစ်မှာ
ကွန်ဂရက်ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းတစ်ခုထည့်ရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရန်အချိန်ဇယားကိုပြင်ဆင်သည့်နေရာ၌၎င်းထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းကိုဖြည့်စွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းသည်ပြဌာန်းချက်အပေါ်ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်သည် (ဥပဒေတွင်အခြားထိရောက်သည့်နေ့ရက်မရှိ) ၎င်း၏ဖြည့်စွက်ခြင်းသို့မဟုတ်အချိန်ဇယားကနေဖယ်ရှားရေး rulemaking.7 အပေါ်မူတည်သည်မဟုတ်
သာဓကအနေနှင့်ကွန်ဂရက်သည် IA ကိုအချိန်ဇယားဆွဲရန်“ ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများ” ကိုထည့်သွင်းရန် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် CSA ကိုပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ထိုပြင်ဆင်ချက်ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုတားဆီးရေးအက်ဥပဒေ (Pub ။
၁၁၂-၁၄၄၊ ခေါင်းစဉ် XI၊ ခေါင်းစဉ် ()) ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့တွင်ဥပဒေဖြင့်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ခြောက်လခန့်အကြာတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးဥပဒေစိုးမိုးရေးအုပ်ချုပ်ရေး (DEA) သည်ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးကုဒ်များကိုချမှတ်သည့်နောက်ဆုံးစည်းမျဉ်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၂၁ CFR (၁၃၀၈.၁၁) တွင်ပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်းကွန်ဂရက်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်အားအချိန်ဇယားဆွဲခြင်းနှင့်အခြားကိုက်ညီသောအပြောင်းအလဲများကိုပြုလုပ်ရန် ၂၁ CFR § 112 ။ မြင် ၇၈ ဗဟိုဘဏ်။ Reg ။ 78 (ဇန်နဝါရီလ 664, 4) ။ မှတ်ချက်ပေးခြင်းနှင့်မှတ်ချက်ထုတ်ခြင်းစည်းမျဉ်းချမှတ်ခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်မလိုအပ်ကြောင်းရှင်းပြရာတွင် DEA ကမှတ်ချက်ချသည်
ဒီဇီဝပစ္စည်း ၂၆ ခုကိုဇယား ၁ မှာထားရှိခြင်း ဇူလိုင်လ ၉ ရက်ကတည်းကစတင်ပြီးဖြစ်သည်။ " အိုင်ဒီ 665 မှာ (အလေးပေးထည့်သွင်း) ။ တနည်းအားဖြင့်ငါပြschedule္ဌာန်းရန် tl1e ဥပဒေပြုအပြောင်းအလဲများပြဌာန်းအပေါ်ချက်ချင်းထိရောက်သောခဲ့ကြသည်။ USC ၂၁ § ၈၁၂ (က) အရလိုအပ်သည်ဖြစ်သော်လည်း ၂၁ CFR § 21 တွင်ပြောင်းလဲမှုများ၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုသည်ဤပြောင်းလဲမှုများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အချိန်ဇယားဆွဲရန်မလိုအပ်ပါ။
ထို့ကြောင့် 2018 လယ်ယာဥပဒေကြမ်းပြen္ဌာန်းလျှော် (နှင့် THC အတွက်) ၏ဖယ်ရှားရေးအောင်မြင်
CSA မှ hemp8 ။ ပြင်ဆင်ချက် 21 CFR ကိုပုဒ်မ ၁၃၀၈.၁၁ ဖြင့်ညွန်ပြရန်လိုအပ်သည်
၆“ Marihuana” နှင့်“ Tetrahydrocannabinols” တို့သည် ၁၉၇၀ တွင်ကွန်ဂရက်တည်ထောင်ခဲ့သောကန ဦး အစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်သည်။
7 CJ ယူနိုက်တက်စတိတ် v ။ Huerta, 547 F.2d 545, 547 (10th Cir ။ 1977) ("ပုဒ်မ 812 (က) အရလိုအပ်သည့်အတိုင်း 'updated" အချိန်ဇယားကိုထုတ်ဝေရန် [F] ဘေးကင်းစပိုင်းတွင်ငါးအချိန်ဇယားတွင်ဖော်ပြထားသောသူတို့အားတ္ထုများ၏တရားဝင်မှုအပေါ်သို့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိ။ ") မွန်ရိုး, United States 408 အက်ဖ် Supp ။ 270,274 (ND Cal ။ 1976) (အပိုင်း 812 (က) နေစဉ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအမိန့်နေစဉ် "ထို့ကြောင့် ပြန်လည်ထုတ်ဝေရန်ထိန်းချုပ်ထားပစ္စည်းဥစ္စာအချိန်ဇယား, it ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အဖြစ်တစ် ဦး အစေခံရန်သမ္မတနိုင်ငံရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူးရှင်းပါတယ် အကယ်၍ မလျော်ကန်စွာပြုလုပ်မိပါက၊ ထိုအချိန်ဇယားများကုန်ဆုံးသွားပြီးသက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သောအချိန်ဇယားများကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးသည်။ ………………………………………………………………… .. [T] သူ
တစ်ခါတစ်ရံတွင်“ အသစ်ပြောင်းခြင်း၊ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း” ကိုပြုလုပ်ရန်အချိန်ဇယားသည်အက်ဥပဒေပါပြဌာန်းချက်များနှင့်အကျုံး ၀ င်သောအရာဝတ္ထုများအားလုံးကိုထင်ဟပ်မည့်စာရင်းတစ်ခုတည်ထောင်ရန်တစ်ခုတည်းအတွက်သာဖြစ်သည်။ ………………………………………… .. “) ။
၂၁ CFR တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဇယား ၁ § 1308.11, CSA တွင်ပေါ်လာပါဘူးအပိုဒ် ()) (3I) တွင် "tetrahydrocannabinols" ၏အဓိပ္ပါယ်ပါဝင်သည်။ cw ·ငှားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမှာအဲဒီ defmition ၏ရှေ့မှောက်တွင်သော်လည်း, ငါ
အဆင့်မြှင့်ထားသောအချိန်ဇယားများကိုထုတ်ဝေရန် ofDEA ၏ဆက်လက်တာဝန်ရှိမှုသည် IHA ကိုသတ်မှတ်ရန်အတွက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်လယ်ယာဥပဒေကိုပြောင်းလဲရန်မလိုအပ်ပါ။
B. စိုက်ပျိုးရေးဌာနသည် ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ စိုက်ပျိုးရေးစျေးကွက်အက်ဥပဒေပုဒ်မ G တွင်ပါ ၀ င်သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်လယ်ယာဥပဒေကြမ်း၏လျှော်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်သည့်စည်းမျဉ်းများကိုထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ပြည်နယ်နှင့်လူမျိုးစုအရထုတ်လုပ်ထားသောပြည်နယ်များရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုတားမြစ်မည်မဟုတ်ပါ။ စီမံကိန်းသို့မဟုတ်ဌာန၏အစီအစဉ်အောက်တွင်ထုတ်ပေးလိုင်စင်အောက်မှာ။
AMA § 297D (က) (ဌ) (က) သည် AMA ၏စာတန်းထိုး G ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်စည်းမျဉ်းများနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုအမြန်ဆုံးထုတ်ပြန်ရန်ညွှန်ကြားသည်။7USC § 1639r (က) (ဌ) (က) ။ ဤစည်းမျဉ်းများသည် AMA § 297B အရပြည်နယ်နှင့်လူမျိုးစုဆိုင်ရာအစီအစဉ်များ၏အတည်ပြုချက်နှင့် AMA § 297C အောက်ရှိဌာနဆိုင်ရာအစီအစဉ်အရလိုင်စင်များထုတ်ပေးခြင်းကိုဖြေရှင်းလိမ့်မည်။ အောက်တွင်ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်းဤစည်းမျဉ်းများကိုထုတ်ပြန်ပြီးပါကပြည်နယ်နှင့်အိန္ဒိယလူမျိုးစုများသည်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်လူမျိုးစုအစီအစဉ်နှင့်အညီထုတ်လုပ်ထားသောသို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်ပို့ကုန်တင်ပို့မှုကိုပြည်နယ်သို့မဟုတ်လူမျိုးစုအစီအစဉ်အရထုတ်လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဌာနဆိုင်ရာအစီအစဉ်အရထုတ်ပေးသောလိုင်စင်အောက်တွင်တားမြစ်မည်မဟုတ်ပါ။
လျှော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်လယ်ယာခွန် ၁၀၁၁ တွင်ပြသခဲ့သည်။10 ပုဒ်မခွဲ (က) ကထောက်ပံ့ပေးသည် -
ဤခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်ဤခေါင်းစဉ်ဖြင့်ပြင်ဆင်ချက်တွင်ပါရှိသောလျှို့ဝှက်ကုန်ပစ္စည်းများ (၁၉၄၆ ၏စိုက်ပျိုးရေးစျေးကွက်အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၉၇ အေတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း) လျှော်ထုတ်ကုန်များအားတားမြစ်ခြင်း။
7 USC § 16390 မှတ်စု§။ ဤပြဌာန်းချက်က 2018 Fann Bill ၏ခေါင်းစဉ် X တွင်ဘာမျှမရှိဟုဖော်ပြထားသည်
ကျွန်ုပ်သည် ၂၀၁၈ လယ်ယာဥပဒေပြင်ဆင်ချက်အရ CSA အောက်ရှိပစ္စည်းဥစ္စာကိုကျွန်ုပ်သိုလှောင်ထားသည့်အချိန်ဇယားတစ်ခုအနေဖြင့်လျှော်ပါသော THC သည် THC မှဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်ယူဆချက်ဖြစ်သည်။
၉ ဇယား ၁ တွင် ၂၁ CFR §9တွင်ထင်ဟပ်သကဲ့သို့အပိုဒ်ပါ“ marihuana ထုတ်ယူမှု” ၏သီးခြားစာရင်းပါ ၀ င်သည်
()) (၅၈) ။ 58 အပြီးတွင်သူသည်ဆေးခြောက်ထုတ်ယူမှုအားညွန်ကြားချက်တွင်ဇယား ၁ တွင်ဖော်ပြခြင်းမရှိပါ CSI § 201. အရ“ marihuana ထုတ်ယူမှု” ဟူသောဝေါဟာရကိုစည်းမျဉ်းတွင်“ တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအရာများပါဝင်သည် သီးခြားဗဓေလသစ်မဟုတ်ဘဲ Cannabis အမျိုးအစားများရှိမည်သည့်အပင်မှမဆိုဆင်းသက်လာနိုင်သည့် cannabinoids စက်ရုံမှရရှိသောရေနံစိမ်းသို့မဟုတ် purHied) ။ " 2018 လယ်ယာဥပဒေကြမ်းကို "marihuana" ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုဖယ်ထုတ်ခဲ့သည် လျှော်, ဒါပေမယ့်အချိန်ဇယားထဲမှာ "marihuana ထုတ်ယူ" ၏စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်ငါ tenn သတ်မှတ်ရန် "marihuana" သို့မဟုတ် "teb · ahydrocannabinols" ဟူသောစကားလုံးများကိုအသုံးမပြုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, လျှော်ထုတ်ယူနေဆဲရှိမရှိမေးခွန်းတစ်ခုပေါ်ပေါက် ငါပစ္စည်းဥစ္စာကိုထိန်းချုပ်တဲ့အချိန်ဇယားအဖြစ်စာရင်းဝင်ခံရဖို့စဉ်းစား။ ပြopinionနာကိုဤထင်မြင်ချက်တွင်ထပ်မံမထည့်သွင်းထားသော်လည်း marihuana ၏ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောပြဌာန်းချက်ဆိုင်ရာအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်အစီအစဉ် ၁ မှတင်ပါးမှထုတ်ယူရရှိသောထုတ်ယူမှုကိုထိထိရောက်ရောက်ဖယ်ရှားပေးသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ နှင့် 21 CFR အတွက်ထိုကဲ့သို့သောထင်ဟပ် § 1308.1I ()) (58) မျှသာကိုက်ညီပြင်ဆင်ရေးပါလိမ့်မယ်။ ·
10 လျှော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုလည်းဖက်ဒရယ် appropriated ရန်ပုံငွေများ resttict သောနှစ်ပတ်လည်သင့်လျော်သောလုပ်ရပ်များအတွက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည် လျှော်၏ transpmtation တားမြစ်ဖို့အသုံးပြုခံရထံမှ။ သို့သော်ထိုပြprovisions္ဌာန်းချက်များသည်အတိုင်းအတာအကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသည် ၂၀၁၄ Fann Bill အခွင့်အာဏာအရထုတ်လုပ်သောလျှော်သာကိုသာဖြေရှင်းပါ၊ ဖက်ဒရယ် အစိုးရ၏ဆောင်ရွက်ချက်များ။ ဆိုလိုသည်မှာပြဌာန်းချက်များအရဖက်ဒရယ်လှုပ်ရှားသူများအား“ ၂၀၁၄ လယ်ယာဥပဒေကြမ်း” ဟုခေါ်သည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုပိတ်ဆို့ခြင်းမှတားမြစ်ထားသည် လျှော် "သူတို့ကပြည်နယ်အရေးယူတားဆီးကြပါဘူး in ကြောင်းကိစ်စ။ မြင် စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၊ အစားအစာနှင့်ဆေးဝါး အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဆက်စပ်သောအေဂျင်စီများအတွက်သင့်တော်သောခွဲဝေမှုအက်ဥပဒေ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အရက်ဆိုင်။ အယ်လ် 2019-116, div ။ ခ၊ § ၇၂၈ (၂၀၁၄ လယ်ယာဥပဒေ§ ၇၆၀၆ ကိုလည်းကောင်း၊ တားမြစ်ချက်t အ Transpoမြဝတီion1 လုပ်ဆောင်နေသည်, ရောင်းချခြင်း, or use of စက်မှုလုပ်ငန်းl လျှော်, or အစေ့s of သစ်သီးရည်h စက်ရုံ, ထို is အရွယ်ရောက် or [၂၀၁၄ လယ်ယာဥပဒေမူကြမ်း ၇၆၀၆] နှင့်အညီစိုက်ပျိုးသောစက်မှုလျှော်ရာပြည်နယ်အတွင်းရှိသို့မဟုတ်ပြင်ပတွင်စိုက်ပျိုးသည် စိုက်ပျိုးသို့မဟုတ်စိုက်ပျိုး ") ။ လည်းကြည့်ရှုပါ စီးပွားကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ တရားမျှတရေး၊ သိပ္ပံနှင့်ဆက်စပ်သောအေဂျင်စီများအတွက်သင့်လျော်စွာခွဲဝေမှုအက်ဥပဒေ၊
116-6, div ။ C, § 536 (“ ဤအက်ဥပဒေမှရရှိနိုင်သည့်ရန်ပုံငွေများကိုတရား ၀ င်ဌာန၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သောအုပ်ချုပ်ရေးမှ [2014 Farm Bill§ 7606] ချိုးဖောက်မှုတွင် အသုံးပြု၍ မရပါ။ ”) ။
လျှော်၏ interstate connnerce တားမြစ်သည်။ သို့သော်ဤပြprovision္ဌာန်းချက်သည်သီးခြားရပ်တည်ချက်သည်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်လူမျိုးစုဥပဒေအရပြည်နယ်သို့မဟုတ်လူမျိုးစုဒေသများရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုပိတ်ပင်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။
ပုဒ်မခွဲ (ခ) ကမူပြည်နယ်နှင့်လူမျိုးစုပိုင်ဆိုင်မှုမှတစ်ဆင့်လျှော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုပြည်နယ်နှင့်အိန္ဒိယလူမျိုးများအားတားမြစ်ထားသည်။ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပေးပါသည်
1 ပို့လွှတ်ခြင်းနှင့်ပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်ပို့ဆောင်ခြင်း - ပြည်နယ်သို့မဟုတ်အိန္ဒိယအနွယ်မှတားမြစ်ခြင်းမပြုရ ထုတ်လုပ်လျှော်သို့မဟုတ်လျှော် prodLtcts ၏ transp011ation သို့မဟုတ်တင်ပို့ in ၏စာတန်းထိုး, G နှင့်အညီ ၁၉၄၆ ၏စိုက်ပျိုးရေးစျေးကွက်အက်ဥပဒေကို (ပုဒ်မ ၁၀၁၁၃ မှထည့်သွင်းထားသည့်အတိုင်း) ပြည်နယ်သို့မဟုတ်အိန္ဒိယအနွယ်မှဆယ်ခုမှတစ်ဆင့်သက်ဆိုင်သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
7 USC § 16390 မှတ်စု§။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်ဤပြဌာန်းချက်သည်ပြည်နယ်ဥပဒေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိနိုင်ငံတော်ဥပဒေကိုပြဌာန်းထားသည်
အဆိုပါ AMA ၏စာတန်းထိုး, G နှင့်အညီထုတ်လုပ်ထားပြီးအဆိုပါလျှော်၏ interstate transp011ation သို့မဟုတ်တင်ပို့တားမြစ်သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပြAs္ဌာန်းချက်အနေဖြင့်သူက“ Supremacy Clause” သည်ဖယ်ဒရယ်ဥပဒေသည်တိုင်းပြည်၏အမြင့်ဆုံးဥပဒေဖြစ်ရမည်ဟူသောရှင်းလင်းပြတ်သားသောစည်းမျဉ်းကိုပြသသည်။ နှင့်ပြည်နယ်တိုင်းရှိတရားသူကြီးများကမည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ [S] ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသို့မဟုတ်ဥပဒေများတွင်ပါရှိသည့်အချက်များသည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေအရချုပ်နှောင်ထားရမည်။ '' ဤနိယာမအရကွန်ဂရက်လွှတ်တော်သည်ဥပဒေပြemp္ဌာန်းရန်အာဏာရှိသည်။ အရီဇိုးနား v ။ အမေရိကန်, 567
US 387, 398-99 (2012) (US Const ။ art ။ VI, cl ။ 2) ကိုကိုးကား။ “ ဖယ်ဒရယ်ဥပဒေအရကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်အရဖက်ဒရယ်ဥပဒေသည်ကိုက်ညီမှုမရှိသောဥပဒေသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းများကိုပယ်ဖျက်သို့မဟုတ်အစားထိုးသည်။ ” ယူနိုက်တက်စတိတ် v ။ Zadeh, 820 FJd 746, 751 (5th Cir ။ 2016) ။
ဖက်ဒရယ်တရားရုံးများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ (၁) အမြတ်ထုတ်ယူခွင့်ကိုဖော်ပြခြင်း (ကွန်ဂရက်မှ“ အမြတ်လျှော့ချခြင်းပြprovision္ဌာန်းချက်” မှတစ်ဆင့်နိုင်ငံတော်မှအာဏာများကို“ ရုပ်သိမ်းခြင်း”)၊ ကွန်ဂရက်က၎င်း၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအရဆောင်ရွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားသည့်နယ်ပယ်တွင်အပြုအမူသည်၎င်း၏သီးသန့်အုပ်ချုပ်မှုမှစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်ရမည်။ ”)12 နှင့်ပconflictိပက္ခကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် (“ ဥပဒေများသည်ဖယ်ဒရယ်ဥပဒေနှင့်ဖက်ဒရယ်နှင့် [S] tate စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာမှုသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဖြစ်နိုင်သည့်အခြေအနေများ”) အခြေအနေများပါ ၀ င်သည့်ပြည်နယ်ဥပဒေများသို့မဟုတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်သောအခါပိုမိုကောင်းမွန်သောနေရာများသို့မဟုတ်” စိန်ခေါ်သောဥပဒေများရှိသည့်အခြေအနေများ။ ကွန်ဂရက်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ရည်မှန်းချက်များကိုပြည့်စုံစွာအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအတွက်အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်။13 အရီဇိုးနား, ၃၉၉-၄၀၀ တွင်အမေရိကန် ၅၆၇ (ကိုးကားချက်များချန်လှပ်ထားသည်)၊ Zadeh ကိုလည်းကြည့်ပါ။ 820 မှာ3F.751d ။
၁၁ ကြည့်ပါ ဥပမာ ၇ USC § 1639i (ခ) (“ (ခ) ဖယ်ဒရယ်အစိုးရ၏ခွင့်ပြုချက်မရရှိ - ပြည်နယ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဌာနခွဲမရှိပါ။ တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်မည်သည့်အခွင့်အာဏာအောက်တွင်တည်ထောင်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်များကုန်သွယ်ရေးအတွက်မည်သည့်အစားအစာသို့မဟုတ်အမျိုးအနွယ်နှင့်ပတ်သက်။ အကျိုးသက်ရောက်ဆက်လက် အစားအစာ (စားသောက်ဆိုင်သို့မဟုတ်အလားတူတည်ထောင်ခြင်းတွင်အမှုထမ်းဆောင်သောအစားအစာများအပါအ ၀ င်) သို့မဟုတ်မျိုးစေ့သည်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာဖြစ်စေမဟုတ်သည်ကိုတံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောမည်သည့်လိုအပ်ချက်မဆို (ထိုဆုံးဖြတ်ချက်သည်အခြားအလားတူအသုံးအနှုန်းများပါ ၀ င်ရမည်။ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီး) သို့မဟုတ်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာကို အသုံးပြု၍ တီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သည့်အရာတစ်ခုသို့မဟုတ်ပါဝင်သည့်အရာတစ်ခုသို့မဟုတ်မျိုးဗီဇအင်ဂျင်နီယာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်မျိုးဗီဇအင်ဂျင်နီယာကိုအသုံးပြုသည်။ ”)
၁၁ ကြည့်ပါ ဥပမာ - Pac ။ ဓာတ်ငွေ့ & Elec ။ Co. , v ။ ပြည်နယ်စွမ်းအင် Res ။ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး & Dev ။ Comm 'n, ၄၆၁ ယူအက်စ် ၁၉၀,၂၁၂ (“ သူသည်ဖက်ဒရယ်အစိုးရသည်နျူးကလီးယားဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအားလုံးကိုသိမ်းပိုက်ထားသည်။
n ဥပမာကိုကြည့်ပါ, 21 USC 903 (“ ဤပုဒ်မခွဲပါပြprovision္ဌာန်းချက်သည်ကွန်ဂရက်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာရာဇ ၀ တ်ပြစ်မှုများအပါအ ၀ င်မည်သည့်ပြည်နယ်ဥပဒေနှင့်မဆိုနိုင်ငံတော်ဥပဒေကိုပယ်ဖျက်ခြင်းအားဖြင့်ထိုပြဌာန်းချက်မှလုပ်ဆောင်သောနယ်မြေကိုသိမ်းပိုက်ရန်ရည်ရွယ်ကြောင်းဖော်ပြခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရမည်မဟုတ်ပါ မဟုတ်ရင်ပြည်နယ်၏အခွင့်အာဏာအတွင်း၌ရှိရလိမ့်မည်
၂၀၁၈ ခုနှစ် Fann Bill ၏ပုဒ်မ ၁၀၁၁၄ (ခ) သည်ပconflictိပက္ခကိုကာကွယ်ရန်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုကျေနပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် AMA ၏စာတန်းထိုး G နှင့်အညီထုတ်လုပ်ထားသောလျှော်သို့မဟုတ်လျှော်ထုတ်ကုန်များကိုနိုင်ငံတွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်တင်ပို့ခြင်းကိုတားမြစ်သည့်ပြည်နယ်ဥပဒေသည် ပုဒ်မ ၁၀၁၁၄ (ခ) တွင်မည်သည့်ပြည်နယ်ကမျှထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုကိုတားမြစ်နိုင်သည်ဟုဖော်ပြထားသည် ။10114 ထို့ကြောင့်ကွန်ဂရက်မှထိုသို့သောပြည်နယ်ဥပဒေကိုပြဌာန်းထားသည်။ တူညီသောရလဒ်အိန္ဒိယ tribes.2018 သက်ဆိုင်သည်
ခြုံငုံ။ ပြောရလျှင်အကောင်အထည်ဖော်မည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုထုတ်ပြန်ပြီးပါကပြည်နယ်နှင့်အိန္ဒိယလူမျိုးစုများသည်တရား ၀ င်ခွင့်ပြုထားသောပြည်နယ်သို့မဟုတ်လူမျိုးစုအစီအစဉ်အရသို့မဟုတ်ဌာနဆိုင်ရာအစီအစဉ်အရထုတ်ပေးသောလိုင်စင်အောက်တွင်တရား ၀ င်တင်ပို့မှုကိုတားမြစ်မည်မဟုတ်ပါ။
C. Stlites နှင့်အိန္ဒိယလူမျိုးစုများသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်စိုက်ပျိုးရေးအက်ဥပဒေအရတရား ၀ င်ထုတ်လုပ်သောပြည်နယ်များရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်တင်ပို့မှုကိုတားမြစ်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။
2018 Fmm ကြောင့်ဖြစ်သည် ဘီလ် ၂၀၁၄ ခုနှစ်လယ်ယာဥပဒေကြမ်း§ ၇၆၀၆ တွင်သစ်ခုတ်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်မှူးအာဏာကိုချက်ချင်းပယ်ဖျက်ခြင်းမပြုပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် 2014 Fann Bill ၏လျှော်ထုတ်လုပ်မှုပြimplementing္ဌာန်းချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်သည့်စည်းမျဉ်းများထုတ်ပြန်ခြင်းသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ နှင့် ၂၀၁၄ Fmm ဥပဒေအရတရား ၀ င်ထုတ်လုပ်သော (လျှော်ထုတ်ကုန်များအပါအ ၀ င်) တင်ပို့မှုကိုအစိုးရမှတားဆီးပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။ အဖြေသည်“ စိုက်ပျိုးရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအက်ဥပဒေ ၁၉၄၆ subt in7606FmmBill § 2018 (ခ) (2019U.SC § 2014onote)” ၏စာပိုဒ်တို၏အဓိပ္ပါယ်ပေါ်မူတည်သည်။ စာတန်းထိုး G နှင့်အညီထုတ်လုပ်သောလျှော်ကိုသာအထက်တွင်ဆွေးနွေးထားသည့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအစီအစဉ်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း AMA § 1946B (f) ၏စစ်ဆင်ရေးအရဤမေးခွန်း၏အဖြေသည်ဟုတ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်သည်။
AMA§ 297B (စ) သည်ပြည်နယ်နှင့်အိန္ဒိယလူမျိုးစုအတွင်းရှိလျှော်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာကိုကျင့်သုံးရန်အစီအစဉ်များကိုပြည်နယ်များနှင့်အိန္ဒိယလူမျိုးစုများအားခွင့်ပြုသည့်ပြဌာန်းချက်များ၏တရားဝင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြထားသည်။ အထူးသ, ပုဒ်မ 297B (စ) ကိုထောက်ပံ့ပေး:
(စ) EFFECT.- ဤအပိုင်းတွင်မည်သည့်အရာမျှပြည်နယ်တစ်ခု၌အိန္ဒိယနိုင်ငံမှလျှော်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုတားမြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်အိန္ဒိယမျိုးနွယ်စု၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုတားမြစ်သည်။
လျှော်၏ထုတ်လုပ်မှုပုဒ်မ 297C သို့မဟုတ် (စည်းမျဉ်းများအပါအဝင်) အခြားဖက်ဒရယ်ဥပဒေများနှင့်အညီလျှင်ဤပြည်နယ်အပိုင်းသို့မဟုတ်ပြည်နယ်၏လူမျိုးစုအစီအစဉ်ကိုအတည်ပြုမပေးသော (!) အဘို့, နှင့်
14 တနည်းအားဖြင့်ပုဒ်မ ၁၀၁၁၄ (ခ) သည်ပြည်နယ်မှတစ်ဆင့်လျှော်သို့မဟုတ်လျှော်ထုတ်ကုန်များသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုတားမြစ်ရန်အတွက်ပြည်နယ်၏အာဏာကိုအတိအလင်းရုပ်သိမ်းထားသောကြောင့်၊
15 AMA§ 297B (က) (၃) တွင်ပုဒ်မ ၂၉၇ ဘီ (က)“ ပြည်နယ်သို့မဟုတ်အိန္ဒိယအနွယ်တစ်မျိုး၏မည်သည့်ဥပဒေကိုမှတားမြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ခြင်း” ဟူ၍ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသောကြိုတင်ကာကွယ်မှုပြဌာန်းချက်ပါ ၀ င်သည်။ , G] .3 TU.SC § J297p (က) (11) ။ သို့ရာတွင်၊ ထိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုအစီအစဉ်ကိုကန့်သတ်ထားသည် ထုတ်လုပ်မှု လျှော်၏ - မ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး သို့မဟုတ်တင်ပို့ခြင်းကြောင့် ၂၀၁၈ လယ်ယာဥပဒေ§ IOI2018 (ခ) နှင့်မဆန့်ကျင်ပါ။
၇ USC § 1639p (စ) (အလေးပေးထည့်သွင်း) ။
ဒီပြprovision္ဌာန်းချက်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်အနွယ် AMA အောက်မှာ ari အတည်ပြုအစီအစဉ်ကိုရှိသည်မဟုတ်သောပြည်နယ်သို့မဟုတ်လူမျိုးစုနယ်မြေများတွင်လျှော်ထုတ်လုပ်မှုကိုဖြေရှင်း။ § 297B ။ ဤပြprovision္ဌာန်းချက်သည်ဤသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်၎င်းပြည်နယ်သို့မဟုတ်မျိုးနွယ်စုများမှလျှော်ကြေးထုတ်လုပ်မှုကိုထုတ်လုပ်ပါကခွင့်ပြုချက်မရရှိသေးကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။ ဖြစ်စေ AMA အောက်ရှိဌာန၏အစီအစဉ်နှင့်အညီ § 297C or အခြားဖက်ဒရယ်ဥပဒေများအရပြည်နယ်သို့မဟုတ်အနွယ်သည်၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုကိုတားမြစ်ခြင်းမရှိပါ။
၂၀၁၈ လယ်ယာဥပဒေကြမ်းတွင်ထည့်သွင်းထားသည့် AMA ၏စာတန်းထိုး G ၏ရိုးရှင်းသောဘာသာစကားသည်လျှို့ဝှက်ပုံသဏ္fာန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်စေသည် တရားဝင်အောက်မှာထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်
"အခြားဖက်ဒရယ်ဥပဒေများ။ " ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့“ အခြားဖက်ဒရယ်ဥပဒေတွေ” က ၂၀၁၄ လယ်ယာဥပဒေကိုလွှမ်းခြုံတယ်
ကျွန်ုပ်သိသည်အတိုင်း, ၂၀၁၄ လယ်ယာဥပဒေမူကြမ်းအမှတ် ၇၆၀၆ ကိုမထုတ်ပြန်မီ CSA သည်လျှော်ထုတ်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည့်တစ်ခုတည်းသောဖက်ဒရယ်ဥပဒေဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပစ္စည်းကိုထိန်းချုပ်ထားသောဇယားကို“ ထုတ်လုပ်ခြင်း” အဖြစ်လျှော်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို CSA အရမှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့မဟုတ်စွန့်လွှတ်မှုအောက်တွင်ခွင့်ပြုထားသောအတိုင်းအတာ မှလွဲ၍ ယေဘုယျအားဖြင့် CSA အောက်တွင်တားမြစ်သည်။ မြင် ၇ USC
§ 802 (15), 802 (22), 822 နှင့် 823; 21 CFR paJt 1301. (၁) CSA အောက်ရှိထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်လျှော်ကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ (၂) ၂၀၁၄ Fann Bill § 1 အခွင့်အာဏာကိုဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့် (၃) လျှော်ထုတ်လုပ်မှုအာဏာပိုင်များအားစာတန်းထိုးတွင်ပြဌာန်းခြင်း AMA ၏ G၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်မှာ“ အခြားဖက်ဒရယ်ဥပဒေများ” သည် ၂၀၁၄ လယ်ယာဥပဒေကြမ်းကိုရည်ညွှန်းသည်
အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိဆဲဖြစ်သော 7606 ။ ထိုကဲ့သို့သောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်အခြားဖက်ဒရယ်ဥပဒေများဟူသောစကားစုကိုချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်စေသည် ၎င်းသည်“ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်၏အခြေခံနိယာမသဘောတရားအရ couJts သည်ဖြစ်နိုင်လျှင် .effect ကိုအပိုဒ်တိုင်းနှင့်စကားလုံးတိုင်းကိုပေးရမည်။ ” ဥပမာ Loughrin v ။ United States ကိုကြည့်ပါ။ 573 US 351, 358 (2014) (ပြည်တွင်းကိုးကားနှင့်ကိုးကားချန်လှပ်) ။ ·
ထို့ကြောင့်AMA§ 297B (စ) ကို ၂၀၁၈ လယ်ယာဥပဒေမူကြမ်း ၇၆၀၆ (“ အခြားဖက်ဒရယ်ဥပဒေ”) နှင့်အညီတရားဝင်ထုတ်လုပ်ပါက ၂၀၁၈ Faim Bill§ 2018 (ခ) နှင့်အညီဖတ်ရှုပါ။ ထို့နောက် AMA ၏ viJtue § 10114B (စ) ကို၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုကိုတားမြစ်သည်မဟုတ်။ ထိုကဲ့သို့သောလျှော်ကို AMA ကဲ့သို့သောရှုခင်းကိုအထူးရည်ညွှန်းသည့်“ စာတန်းထိုး G နှင့်အညီ” ထုတ်လုပ်လိမ့်မည်
297B (စ) သည်စာတန်းထိုး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် G. ထို့ကြောင့် 2018 လယ်ယာဥပဒေကြမ်း§ 10114 (ခ) အရပြည်နယ်သို့မဟုတ်အိန္ဒိယ
၁၆ ကွန်ဂရက်မှထိုကဲ့သို့သောမြင်ကွင်းကိုမျှော်မှန်းကြောင်း 16 ခုနှစ် Fann Bill§ 2018 (ခ} လယ်ယာဥပဒေမူကြမ်း§ 7605 ကို ၁၂ လတိုင်အောင်ဖျက်သိမ်းခြင်းကိုဘာသာစကားဖြင့်ပေးထားသောကြောင့်ထင်ရှားသည်။ ပြီးနောက် အတွင်းရေးမှူး 297C အစီအစဉ်ကိုတည်စေ။ ထို့ကြောင့်ဤ inte1pretation AMA§ 297C (ဂ) (ဌ) တို့ကပိတ်ပင်ထားသည်မဟုတ်: "[ဈ] n ကိုပြည်နယ်သို့မဟုတ်လူမျိုးစုအစီအစဉ်ပုဒ်မ 297B အရအတည်ပြုမထားတဲ့ပြည်နယ်သို့မဟုတ်အိန္ဒိယအနွယ်၏ဖြစ်ရပ်, သူကရလိမ့်မည် ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရအတွင်းရေးမှူးမှထုတ်ပေးသောလိုင်စင်မရှိဘဲထိုပြည်နယ်တွင်သို့မဟုတ်အိန္ဒိယအနွယ်၏ဆယ်နွယ်နိုင်ငံ၏လျှော်ထုတ်ခြင်းကိုဥပဒေနှင့်မညီညွတ်စေရန်။ " AMA § 297B (f) (l) ရှိ“ သို့မဟုတ်အခြားဖက်ဒရယ်ဥပဒေများ” ကိုရည်ညွှန်းခြင်းနှင့် ၂၀၁၄ လယ်ယာဥပဒေ§§ 2014 သည်သက်ရောက်ဆဲဖြစ်သည်
- ဖက်ဒရယ်ဥပဒေ (၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ Fann Bill § 297) နှင့်အညီထုတ်လုပ်သောလျှော်သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်အတွင်းရေးမှူးမှထုတ်ပေးသောသီးခြားလိုင်စင်မရှိဘဲဥပဒေနှင့်မညီညွတ်ဟုကောက်ချက်ချရန်မှာ AMA §2014C (c) (J) ၏အဓိပ္ပါယ်မဲ့သောစာဖတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ 7606C အစီအစဉ်အရ။ com297s များသည်ကြာမြင့်စွာကတည်းကအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည့်အတိုင်း“ အဓိပ္ပာယ်မဲ့သောရလာဒ်များကိုထုတ်လုပ်ရန်ပြဌာန်းထားသောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များသည်ဖြစ်ရမည် ဥပဒေပြုရည်ရွယ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီလျှင် ifaltemative အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရရှိနိုင်ပါ။ " Griffin v ။ Oc_eanic ကန်ထရိုက်တာများ၊ 458 အမေရိကန် 564,575 (1982) ။
မျိုးနွယ်စုသည်ဤပြည်နယ်သို့မဟုတ်လူမျိုးစုပိုင်နက်များမှတဆင့်“ ၂၀၁၄ လယ်ယာဥပဒေကြမ်းလျှော်ရေး” ၏ transp01iation သို့မဟုတ်တင်ပို့ခြင်းကိုတားမြစ်မည်မဟုတ်ပါ။17
ကျွန်ုပ်သည်ဤနိဂုံးချုပ်သည်အိုင်ဒါဟို၏ခရိုင်မှမကြာသေးမီကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုနှင့်တင်းမာမှုရှိကြောင်းဝန်ခံသော်လည်း၎င်းသည်အနောက်ဗာဂျီးနီးယားတောင်ပိုင်းခရိုင်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောအမှု၌လည်းမကြာသေးမီကဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ မည်သည့်တရားရုံးမှ AMA § 297B (f) (l) တွင်ရှိသော“ အခြားဖက်ဒရယ်ဥပဒေများ” ၏ဘာသာစကားကိုကျွန်ုပ်မှအဖြေမပေးခဲ့ပါ။
In Big Sky Scientific LLC v ။ Jdaho ပြည်နယ်ရဲ၊ အမှု ၁၉-CV-19 (Id အိုင်ဒါဟို) မှတရားသူကြီးတရားသူကြီးတစ် ဦး သည် OregoI00040 လျှော်တင်ပို့မှုကိုကော်လိုရာဒိုသို့သယ်ယူပို့ဆောင်ပြီးအိုင်ဒါဟိုပြည်နယ်ရဲမှတားမြစ်ထားသောတင်ပို့မှုမှာ“ စာတန်း (G) နှင့်အညီ” ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် AMA § 1B rn1der တွင်အတည်ပြုသောမူလအစတွင်အတည်ပြုထားသောအစီအစဉ်မရှိပါ။ အတွင်းရေးမှူးသည် AMA § 297C အရအစီအစဉ်ကိုမဖွဲ့စည်းရသေးပါ။18 တရားသူကြီးကအော်ရီဂွန်ဥပဒေကိုလျှော်ဖွတ်စိုက်ပျိုးရန်ခွင့်ပြုချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ တရား ၀ င်မှတရားလိုအားလျှော်ကြေးငွေကိုအော်ရီဂွန်စိုက်ပျိုးရေးဌာနမှလိုင်စင်ရသည့်စိုက်ပျိုးသူတစ် ဦး မှထုတ်လုပ်ခဲ့သည်ဟုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ (၂၀၁၄ ခုနှစ်၊19 သို့သော်တရား ၀ င်တရား ၀ င်တရား ၀ င်တရား ၀ င်တရားစွဲဆိုမှုအားငြင်းဆိုရာတွင်တရားသူကြီး· 2018 လယ်ယာဥပဒေကြမ်းကိုပြဌာန်းရာတွင်ကွန်ဂရက်သည်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေ၏ prnposes များအတွက်ပို့လွှတ်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပြည်နယ်အတွင်းရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပတ် ၀ န်းကျင်ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်ရန်ရည်ရွယ်ခဲ့သည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့သည် 2018 Fmm Bill တွင်တွေ့ရသောလျှော်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ဖက်ဒရယ် (သို့မဟုတ်လိုက်နာရန် [S] tate or [T] ribal) အစီအစဉ်တွင်ပါရမည်။ ”20 ၂၀၁၈ လယ်ယာဥပဒေကြမ်းသည်လျှော်ကြေးကိုပြည်နယ်လိုင်းများသို့ပို့ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသော်လည်းတရားသူကြီးမှထိုပြည်နယ်များမှကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအကာအကွယ်များကို ၂၀၁၈ လယ်ယာဥပဒေကြမ်း၏အခွင့်အာဏာအရထုတ်ပြန်သောစည်းမျဉ်းများအရထုတ်လုပ်သည့်လျှော်ကိုသာအသုံးပြုသည်။1 ထိုစည်းမျဉ်းများမရှိသေးသဖြင့်ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားသောလျှော်သည်အိုင်ဒါဟို၏ဥပဒေကိုလွှဲပြောင်းခြင်းကိုတားမြစ်ထားသည်။
ကြံ့ဖွံ့အတွက်တစ် pmty မဟုတ်ပါဘူး Big Sky ကိစ္စနှင့်ဤရုံးသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်လယ်ယာဥပဒေကြမ်းအရတရားဝင်တင်ပို့သည့်လျှော်တင်ပို့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တရားသူကြီး၏ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုနှင့်မကိုက်ညီပါ။ In
၁၇ ဤနိဂုံးသည်ဥပဒေပြုရေးသမိုင်းတွင်လည်းထောက်ခံမှုရပုံရသည်။ preemption ပြဌာန်းချက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရှင်းပြရာတွင်ညီလာခံအစီရင်ခံစာကဤသို့ဖော်ပြသည် -“ [S] tates နှင့်အိန္ဒိယလူမျိုးစုများသည်သူတို့၏နယ်နိမိတ်အတွင်းလျှော်နှင့်လျှော်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းကိုကန့်သတ်ထားနိုင်သော်လည်း Sec အတွင်းရှိ Managers 17 [sic] သည် [S] tate နှင့်အိန္ဒိယမျိုးနွယ်စုများမှ [S] tate သို့မဟုတ်အိန္ဒိယနယ်မြေများမှတစ်ဆင့်လျှော်သို့မဟုတ်လျှော်ထုတ်ကုန်များသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်တင်ပို့ခြင်းကိုကန့်သတ်ရန်ခွင့်မပြုရန်သဘောတူခဲ့သည်။ HR rep ။ 10112 (01) မှာအမှတ် 115-1072 ။ မှတ်သားစရာမှာ Managers သည် AMA ၏ခေါင်းစဉ် G အောက်တွင်ရေးဆွဲထားသောအစီအစဉ်အောက်တွင်ထုတ်လုပ်သောလျှော်ရုံမျှသာမဟုတ်ပါ။
18 Big Sky ကိုကြည့်ပါ။ ECF စာရွက်စာတမ်း။ နံပါတ် (၃၂)၊ စာချွန်လွှာဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အမိန့် Re: ကြိုတင်တရားစွဲဆိုမှုအတွက်တရားလို၏အဆိုတော်၊ ကိုလညျးရှု ECF စာရွက်စာတမ်း။ အမှတ် ၆၊ စာချွန်လွှာဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အမိန့် Re: ယာယီထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအမိန့်အတွက်တရားလိုအရေးပေါ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပဏာမ lltjunction နှင့်တရားလိုများ Overlength အကျဉ်းချုပ် file ကို (ရနိုင်သည် 2019 WL 438336 (ဖေဖော်ဝါရီလ 2, 2019))
19 Big Sky, ECF စာရွက်စာတမ်း။ 32, 5-7 မှာ # 8 ။
20 အိုင်ဒီ3မှာ။
21 အိုင်ဒီ 19-26 မှာ။
ဥပဒေပြlanguage္ဌာန်းထားသောဘာသာစကားကိုအနက်ဖွင့်ရာတွင်တရားသူကြီးများသည်ပြဌာန်းချက်ဆိုင်ရာဆောက်လုပ်ရေး၏လူသိများသောနိယာမအား“ အခြားတူညီသောဥပဒေ၏ပြဌာန်းချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိ၊ အဓိပ္ပာယ်မရှိသောသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံဖော်ပြသည့်နည်းဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခြင်းမပြုရ” ကိုမှန်ကန်စွာမှတ်ချက်ချခဲ့သည်။ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်၏လမ်းညွှန်မူသည်တရားသူကြီးက AMA § 1B (f) ရှိ“ အခြားဖက်ဒရယ်ဥပဒေများ” ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြေရှင်းခြင်းသို့မဟုတ်ထိုဘာသာစကားကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန်ကြိုးပမ်းခြင်းမရှိပါ။ အိုင်ဒါဟိုတရားရုံးကပြstat္ဌာန်းချက်တစ်ခုလုံးကိုဖတ်ရှုဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီးငါကအပြီးသတ်သော“ အခြားဖက်ဒရယ်ဥပဒေများ” အပိုဒ်ကိုမစဉ်းစားခဲ့ဘူး။ တရားသူကြီး၏စီရင်ချက်၏သဘောသဘာဝကိုကြည့်။ သူ၏ထင်မြင်ချက်သည်ပဏာမတရားရုံးမိန့်ခွန်းကိုငြင်းပယ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်
အပြန်အလှန်အားဖြင့် ၂၀၁၈ လယ်ယာဥပဒေမူကြမ်း§2018၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်ဤဥပဒေရေးရာအမြင်အားဖြင့်အနောက်ဗာဂျီးနီးယားတောင်ပိုင်းခရိုင်တွင်ထုတ်ပြန်သောဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ In ယူနိုက်တက်စတိတ် v ။ Mallory, အမှုအမှတ် -18-CV-1289 (SDW Va ။ )၊ \_ တရားမျှတမှုရှိသောတရားမျှတမှုသည် CSA ကိုချိုးဖောက်ခြင်းနှင့် ၂၀၁၄ Fann ဥပဒေကြမ်း၏အပြင်ဘက်တွင်စွပ်စွဲထားသောကြီးထွားလာသည့်လျှော်စိမ်းမှုကိုဖမ်းဆီးရန်အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်လယ်ယာဥပဒေကြမ်းအရ Kentucky ဓနသဟာယမှလိုင်စင်ရရှိထားသော Kentucky ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူမှ 2014 ခုနှစ် Fmm Bill§ 2014 ရှေ့ပြေးအစီအစဉ်အရအနောက်ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်မှလိုင်စင်ရသောထုတ်လုပ်သူမှထိုအဖြစ်အပျက်ကိုပြhemနာသည်လျှော်ကိုပေါက်ခဲ့သည်။
7606 ရှေ့ပြေးအစီအစဉ်။ တရားရုံးကတရားခံအားပဏာမတရားရုံးမှဖျက်သိမ်းရန်နှင့်အစိုးရ၏အမှုကိုလုံး ၀ ပယ်ဖျက်ရန်အတွက် ၂ ဝ ၁၄ ခုနှစ်လယ်ယာဥပဒေကြမ်း၊ သင့်လျော်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပြဌာန်းချက် ၂၄ နှင့် ၂၀၁၈ လယ်ယာဥပဒေကြမ်းတို့ပေါင်းစပ်မှုအပေါ်မှီခိုခဲ့သည် ။2014 preliminm-y တရားရုံးမှဖျက်သိမ်းခြင်း , တရားရုံးပြည်နယ်များလိုင်းများကိုဖြတ်ပြီး Pennsylvania ပြည်နယ်သို့ processing နှင့် sale.24 များအတွက်လျှော်ထုတ်ကုန်သယ်ဆောင်ရန်တရားခံ pe2018mitted
အဆိုပါပေမယ့် Mallory တရားရုံးသည်လျှော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုပိတ်ဆို့ရန်မည်သည့်ကြိုးပမ်းမှုကိုမဆိုကိုင်တွယ်ရန်အခွင့်အရေးမရှိပါ။ တရားရုံးသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် Fmm Bill § 2018 ကိုကိုးကားပြီး“ လျှော်၊ မျိုးစေ့နှင့်လျှော်၊ ထုတ်ကုန်များကိုပြည်နယ်လိုင်းများသို့သယ်ယူပို့ဆောင်ခွင့်ပြုသည်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ၂၈ ခရိုင်တရားသူကြီး၏ထင်မြင်ချက်သည် ၂၀၁၄ Fann Bill§ 10114 အရထုတ်လုပ်သောလျှော်ကိုပြည်နယ်၊ Tribal သို့မဟုတ် Depmtmental အစီအစဉ်များအရထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲဖြေရှင်းခဲ့သည်။ နိဂုံးချုပ်သည် Mall01y တရားရုံးမှကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အနက်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်ကိုက်ညီပါသည်
22 အိုင်ဒီ 21-22 မှာ (ကိုးကား။ ) Padash v ။ I.NS. , 258 F.3d ll61, 1170-71 (9th Cir ။ 2004)) အဆိုပါတရားသူကြီးဆက်ပြောသည်:
ဒါဟာ statutmy ဆောက်လုပ်ရေး၏အဓိကနိယာမဖြစ်ပါသည်, တပြင်လုံးကိုအပေါ်သို့, ထိုပညတ်တရားသည်ဖြစ်သင့်သည် လျှင်, ကြောင်းဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည် it တားဆီးနိုင်သည်၊ မည်သည့်ဝါကျ၊ ဝါကျသို့မဟုတ်စကားလုံးများမလိုအပ်ဘဲ၊ အရေးမကြီးဘူး ... ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်သည်ဖြစ်နိုင်လျှင်တိုင်းပြcl္ဌာန်းထားသောအပိုဒ်နှင့်စကားလုံးများကိုအကျိုးသက်ရောက်ရန်ဖြစ်သည်။
အိုင်ဒီ 23 မှာ (ပြည်တွင်းရေးကိုးကားနှင့်အညွှန်းများချန်လှပ်) ။
၂၃ အမှန်မှာ၊ တရားသူကြီး၏ငွေသည်အယူခံဝင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကြည့်ပါ Big Sky သိပ္ပံပညာ LLC v ။ Bennetts က, ဖြစ်ရပ်မှန်အမှတ် 19-35138 (9th Cir ။ ) ။
24 ကြည့်ပါ ပုစွန် အောက်ခြေမှတ်ချက် ၁၀ ။
25 Mal / olJ ', ECF စာရွက်စာတမ်း။ # 60, Memorandum ထင်မြင်ချက်နှင့်အမိန့်, 2019 WL 252530 (SDW Va ။ ဇန်နဝါရီလ 17, 2019) ။
26 ကျား၊ မ BCF Doc ။ # ၇၂၊ ၂၀၁၀၉ WL 72 စာချွန်လွှာ၏သဘောထားနှင့်အမိန့် (SDW Va၊ မတ်လ ၆၊ ၂၀၁၉) ။
27 ကျား၊ မ၊ BCF Doc ။ * 60 မှာ # 2019, 252530 WL3။
28 Mallory, BCF Doc ။ မှာ # 72, 2019 WL 1061677 * ၆:
ထိုလျှော်ကို ၂၀၁၄ လယ်ယာဥပဒေကြမ်းအောက်တွင်သို့မဟုတ် ၂၀၁၈ လယ်ယာဥပဒေကြမ်း၏ပြည်နယ်၊ လူမျိုးစုသို့မဟုတ်ဌာန၏အစီအစဉ်အောက်တွင်ထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်အနောက်ဗာဂျီးနီးယားတောင်ပိုင်းခရိုင်၏နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပြီးခရိုင် ofldaho တရားသူကြီး၏ထင်မြင်ချက်အရပဏာမဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ပါ။29
ပြဌာန်းချက်ဆိုင်ရာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များတွင်ပြဌာန်းချက်၏စာသားကိုအုပ်ချုပ်သည်။ ထိုစာသားကိုတစ်အုပ်လုံးဖတ်ပြီး eve1y ဟူသောစကားလုံးအဓိပ္ပါယ်ကိုပေးရမည်။ “ အခြားဖက်ဒရယ်ဥပဒေများ” ကိုရည်ညွှန်းခြင်းအားအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရမည်ဖြစ်ပြီးထိုဘာသာစကားသည်လျှော်ထုတ်ခြင်းကိုလက်ရှိလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးသောဖက်ဒရယ်ဥပဒေကိုရှင်းလင်းစွာရည်ညွှန်းသည် - ၂၀၁၄ Fann Bill § ၇၆၀၆ ။ အဆိုပါ AMA ၏စာတန်းထိုး, G ။ ပြည်နယ်များနှင့်အိန္ဒိယလူမျိုးစုများအနေဖြင့်ထိုပြည်နယ်သို့ (သို့မဟုတ်) လူမျိုးစုနေထိုင်မှုမှတစ်ဆင့်ပို့ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုတားမြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ·
D. အချို့လယ်ယာမြေများမှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်လယ်ယာဥပဒေကြမ်းသည်လျှော်ထုတ်လုပ်မှုကိုကန့်သတ်ထားသည်။
2018 လယ်ယာဥပဒေကြမ်းတွင်ပြစ်မှုထင်ရှားကျူးလွန်သောရာဇ ၀ တ်သားများကိုလျှော်ထုတ်နိုင်စွမ်းကိုဖော်ပြထားသည်။ ၂၀၁၄ Faim Bill သည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ နှုတ်ဆိတ်နေသည်။ AMA§ 2014B (င) (၃) (ခ) (နောက်မှ“ Felony ပြဌာန်းချက်”) သည် ၂၀၁၈ လယ်ယာဥပဒေကြမ်းတွင်ထည့်သွင်းထားသည်မှာ -
ယေဘူယျအားဖြင့်အပိုဒ် (၂) တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းမှတစ်ပါး၊ ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေအောက်တွင်ထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းများကို - မတိုင်မီ၊ ဒီပြen္ဌာန်း၏နေ့စွဲ ခေါင်းစဉ်ကလေး ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ဆုံးဖြတ်သည့်နေ့ရက်မှ I0 နှစ်ကာလအတွင်းခွင့်မပြုရ၊
(!) ဤအပိုင်းသို့မဟုတ်ပုဒ်မ 297C အရတည်ထောင်သည့်အစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်ခြင်း၊ နှင့်
(၂) ပုဒ်မ ၂၉၇ (က) အရထုတ်ပေးသောစည်းမျဉ်းသို့မဟုတ်လမ်းညွှန်ချက်များအရလျှော်ထုတ်လုပ်ရန်။
- ပုဒ်မ (၁) တွင်လိုင်စင်ဖြင့်တရားဝင်သောမည်သူမဆိုနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ (သို့) စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာပုဒ်မ ၇၆၀၆ ကခွင့်ပြုထားသောရှေ့ပြေးအစီအစဉ်အရလုပ်ပိုင်ခွင့် မတိုင်မီ of2014 အက်ဥပဒေ (7 USC 5940) ဒီစာတန်းထိုးပြact္ဌာန်းသည့်ရက်စွဲ.
7 USC §ဌ 639p (င) (3) (ခ) (အလေးပေးထည့်သွင်း) ။ အပိုင်း ၁၈၁၁ Fann Bill ၏ဆောင်းပါး ၁၀၁၁၃ တွင်ထည့်သွင်းထားသည့်အတိုင်း“ ဤစာတန်းထိုး၏ပြthe္ဌာန်းသည့်နေ့စွဲ” ကိုရည်ညွှန်းသည် AMA ၏စာတန်းထိုး G ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ “ ဤစာတန်းထိုး၏ပြdate္ဌာန်းသည့်နေ့စွဲ” သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်လယ်ယာဥပဒေကြမ်းကိုပြthe္ဌာန်းသည့်နေ့ဖြစ်သည်။
Felony ပြprovision္ဌာန်းချက်ကိုရှင်းပြရာတွင်ညီလာခံအစီရင်ခံစာက -
ထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရသူသည်ပြစ်မှုထင်ရှားသည့် နေ့မှစ၍ JO နှစ်တာကာလအတွက် [S] tate သို့မဟုတ် [T] ribal အစီအစဉ်အရပါ ၀ င်ခွင့်မရှိပါ။ သို့သော်ဤတားမြစ်ချက်သည်ဤစာတန်းထိုးမထုတ်ပြန်မီ ၂၀၁၄ ခုနှစ်စိုက်ပျိုးရေးအက်ဥပဒေမှခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်း [S] သစ်ဆွေးစမ်းသပ်အစီအစဉ်တွင်တရား ၀ င်ဆိုင်းငံ့ထားသောထုတ်လုပ်သူများနှင့်သက်ဆိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤစာတန်းထိုးကိုထုတ်ပြန်သည့်ရက်နောက်ပိုင်းတွင်ထပ်ဆင့်ပြစ်မှုခံယူချက်သည်ကျွန်ုပ်သည် ၀ ၀ နှစ်ဖြစ်လာသည်
29 Mallory, BCF Doc ။ နံပါတ် * 72၊ 2019 WL l 06 I677, *9(အမေရိကန်မှအဆိုပြုချက်ကိုပြင်ဆင်ရန်နှင့်ပယ်ချရန်အဆိုပြုချက်ကိုငြင်းပယ်ခြင်း) ။ Big Sky, BCF Doc ။ (၂၂) မှာ (၃၂)၊ (တရားစွဲဆိုသူကိုတရား ၀ င်ကြိုတင်မိန့်ကြားခြင်းမပြုရန်ငြင်းဆန်ခြင်းနှင့် comt သည်သီးခြားရှေ့နေကိစ္စကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာညီလာခံတစ်ခုချမှတ်ခြင်းကိုသီးခြားထုတ်ပြန်လိမ့်မည်ဟုမှတ်ချက်ချသည်) ။
ထုတ်လုပ်သူသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ခွင့်ပြုထားသောရှေ့ပြေးအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်မှုရှိမရှိ၊
HR rep ။ မဟုတ်ဘူး။ 115 (1072) မှာ 737-2018 ။
အချုပ်အားဖြင့်ပြောရလျှင်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဖက်ဒရယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုကိုထိန်းချုပ်ထားသည့်ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပြစ်မှုထင်ရှားကြောင်းပြသခဲ့သည်မှာမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ AMA ၏စာတန်းထိုး G အရပုဒ်မ -၆၀ အရစီရင်ချက်ချပြီးသည့်နောက်မှ i0 နှစ်အထိဖြစ်သည်။ ၂ ဝ ၁၄ ခုနှစ်လယ်ယာဥပဒေကြမ်းအရလျှော်လျှော်စွာထုတ်လုပ်သောသူနှင့်သက်ဆိုင်သည့် Felony ပြဌာန်းချက်အပိုဒ် (၂) တွင်ခြွင်းချက်တစ်ခုရှိသည်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ မတိုင်မီ 2018, နှင့်ထိုနေ့မတိုင်မီထိန်းချုပ်ထားပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်စပ်လျဉ်းပြစ်မှု၏ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့သညျ။ ပြည်နယ်များနှင့်အိန္ဒိယလူမျိုးစုများသည်ယခုအခါသန္ဓေသားသို့မဟုတ်လူမျိုးစုပိုင်နက်နယ်မြေတွင်လျှော်ထုတ်လိုသူ၌ချုပ်နှောင်ထားသည့်ပစ္စည်းများကိုမထိန်းချုပ်နိုင်သည့်ထိန်းချုပ်ထားသော ၀ တ္ထုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ မည်သည့်ဖက်ဒရယ်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်ပြစ်မှုများကိုကျူးလွန်သည်ဆိုခြင်းကိုဆုံးဖြတ်ရန် Jonsibility ကိုဆုံးဖြတ်ရန်။
အလေးထားသင့်သောဤပြissueနာ၏နောက်ထပ်အရေးကြီးသောကဏ္ aspects နှစ်ခုရှိသည်။
ပထမ ဦး စွာ၊ ၂၀၁၈ လယ်ယာဥပဒေကြမ်းသည်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေထက်ပိုမိုတင်းကြပ်သောလျှော်ထုတ်လုပ်မှုကိုစည်းမျဉ်းဥပဒေများပြStates္ဌာန်းရန်နှင့်ပြenfor္ဌာန်းရန်ပြည်နယ်နှင့်အိန္ဒိယလူမျိုးစုများ၏အခွင့်အာဏာကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ မြင် AMA
297B (က) (၃) (၇ USC § ၁၆၃၉p (က) (၃)) (“ ဤပုဒ်မခွဲသည်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်အိန္ဒိယအနွယ်စုမှမည်သည့်ဥပဒေကိုမှတားမြစ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိပါ။ ) ဒီစာတန်းထိုးထက်ပိုတင်းကြပ်သည်။ ") ။ သာဓကအားဖြင့်ပြည်နယ်တစ်ခုသည်ပြည်နယ်အတွင်းရှိလျှော်ကြေးကြီးထွားခြင်းသို့မဟုတ်စိုက်ပျိုးခြင်းကို ဆက်လက်၍ တားမြစ်နိုင်သည် ။3 အထက်တွင်ဆွေးနွေးထားသည့်အတိုင်းပြည်နယ်သို့မဟုတ်အိန္ဒိယအနွယ်မှတင်ပါးထုတ်လုပ်မှုကိုတားမြစ်သော်လည်း၎င်းသည်နိုင်ငံတွင်းရှိတင်ပို့မှုကိုနိုင်ငံတွင်းတင်ပို့ခြင်းကိုတားမြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ ဖက်ဒရယ်ဥပဒေနှင့်အညီထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်၊ 2018 Faim Bill သည်ကျန်းမာရေးနှင့်လူသား ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အတွင်းရေးမှူး (“ HHS အတွင်းရေးမှူး”) သို့မဟုတ်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးကော်မရှင်နာ (“ FDA ·· Commissioner”) ၏ဖက်ဒရယ်စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဆေးဝါးနှင့် အလှကုန်အက်ဥပဒေ (၂၁ USC § ၃၀၁ et seq ။ ) နှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၅၁ (USC ၄၂ § ၂၆၂) ။ မြင် AMA§ 297D (ဂ) (၇ USC
1639r (ဂ) ။ AMA§ 297D (b) ကလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်လျှော်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောဖက်ဒရယ်စည်းမျဉ်းများနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုထုတ်ပြန်ရန်“ တစ်ခုတည်းသောအခွင့်အာဏာ” ရှိရမည်။ ဤအခွင့်အာဏာသည် FDA ဥပဒေများအောက်တွင်ဖက်ဒရယ်စည်းမျဉ်းများနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုပြဌာန်းရန် HHS အတွင်းရေးမှူးနှင့် FDA ကော်မရှင်နာ၏အခွင့်အာဏာအောက်တွင်ရှိသည်။7USC § 1639r (ခ) ။
3 °အချို့သောပြည်နယ်များသည်လျှော်စိုက်ပျိုးခြင်းကိုဆက်လက်တားမြစ်ထားသည်။ မြင် ပြည်နယ်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်များ၏အမျိုးသားညီလာခံ၊ “ ပြည်နယ်တွင်းတရားရုံးရုံးခန်း Hemp Statutes” မှာရရှိနိုင် http:// www.11cs l. org /researc h/ agriculture-နှင့်-rural- ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု / ပြည်နယ်-· Induss trial-hဝင်းနိုင်ထွန်း-statutes.aspx # stစားခဲ့ (ဖေဖော်ဝါရီလငါ, 2019 updated) ။
ငါ 2018 Fann ဘီလ်၏ patt အဖြစ်ပြen္ဌာန်းသည့်လျှော်ပြprovisions္ဌာန်းချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အောက်ပါနိဂုံးချုပ်ရောက်ရှိပါပြီ
၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက် ၂၀၁၈ တွင်ပြန့်နှံ့နေသော 2018 Fatm Bill အားပြhem္ဌာန်းချက်အရပုဆိန်သည် CSA ၏ဇယား ၁ မှဖယ်ရှားခြင်းခံရပြီးထိန်းချုပ်မှုမရှိတော့ပါ။
USDA သည် AMA ၏ subtitle G တွင်ပါ ၀ င်သည့် 2018 Fatm Bill ၏လျှော်ထုတ်လုပ်မှုပြprovisions္ဌာန်းချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်သည့်စည်းမျဉ်းများကိုထုတ်ပြန်ပြီးနောက်၊ ပြည်နယ်နှင့်လူမျိုးစုအနွယ်များသည်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်လူမျိုးစုများ၏အစီအစဉ်အရသို့မဟုတ်ထုတ်ပေးသည့်လိုင်စင်အောက်တွင်တရား ၀ င်ထုတ်ကုန်တင်ပို့မှုကိုပြည်နယ် / တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှတားမြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါ Depattmental nnder i;
၂ ဝ ၁၄ ခုနှစ်လယ်ယာမြေအောက်၌တရား ၀ င်ထုတ်လုပ်သောသစ်ထုတ်လုပ်မှုကိုပြည်နယ်နှင့်အိန္ဒိယလူမျိုးစုများအကြားပြည်နယ်နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်တင်ပို့ခြင်းကိုတားမြစ်မည်မဟုတ်ပါ
ထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဖက်ဒရယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းခံရသူသည် AMA ၏စာတန်းထိုး G အရလျှော်ထုတ်လုပ်ခြင်းအပေါ် ၁၀ နှစ်တာ ၀ န်ယူခွင့်မရှိသောကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။ ချွင်းချက်တစ်ခုမှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်မတိုင်မီ ၂၀၁၄ လယ်ယာဥပဒေကြမ်းအရတရား ၀ င်ကြီးထွားလာပြီးထိုယုံကြည်ချက်ကြောင့်ထိုနေ့မတိုင်မီတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
၂၀၁၈ လယ်ယာဥပဒေမူကြမ်းသည်ပြည်နယ်နှင့်အိန္ဒိယလူမျိုးစုများ၏အခွင့်အာဏာကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးပိုမိုတင်းကြပ်သော ilian ဖက်ဒရယ်ဥပဒေဖြစ်သောလျှော်ထုတ်လုပ်မှုကိုစည်းမျဉ်းဥပဒေများပြenfor္ဌာန်းရန်နှင့်ပြto္ဌာန်းရန် ထို့အပြင် ilie 2018 Farm Bill သည် HDA အတွင်းရေးမှူးသို့မဟုတ် FDA ကော်မရှင်နာ၏သက်ဆိုင်သော FDA ဥပဒေများအောက်ရှိလျှော်ကိုထိန်းညှိရန်အခွင့်အာဏာကိုအကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းသို့မဟုတ်ပြုပြင်ခြင်းမရှိပါ။
နောက်ထပ် Cannabis သတင်းများဖြင့်နောက်တစ်ပတ်တွင်သင့်ကိုတွေ့မည်။
စာရင်းသွင်းရန်သတိရပါ။ @ https://www.youtube.com/cannabislegalizationnews